Faquuq Ilbaxnimo! – Cabdicasiis Guudcadde
September 16, 2016 September 18, 2016 Guudcadde
Waxa aynu in badan maqalnaa “Dagaalkii Kowaad ee Dunida,” iyo “Dagaalkii Labaad ee Dunida.” Ma waxa jiray ‘run’ ahaan dagaal dunidu ka wada qaybqaadatay, iyo beri adduunkuba ahaa goob dagaal? Labadaa dagaal miyay ka qaybqaateen dadka ku nool Hindiya iyo Shiinaha (oo ah saddex-meeloodoow meel dadka dunida)? Oo haddaa ma Afrika iyo Ameerikada Koonfureed ayaa ka qayb ahayd? Oo Aasiya badankeedu ma lug bay ku lahayd? Wuxu ma waxa uu ahaa “Dagaal Adduun” mise, ‘Dagaal Sokeeye” oo, sida Cabdiwahaab Masiiri qabo, “Galbeedi ah” ayaa uu ahaa?
Waxa aynu maqalnaa “Xeerar Calaami ah,” iyo “Maxkamad Caalami ah.” Ma waxa jira xilli caalamku inta uu isu yimi dhigtay xeer, si uu u noqdo mid “caalami ah,” ama/oo uu inta isu yimi dhidbay maxkamad gaadhsiisan heer “caalami ah?” Qaramada Midoobay iyo badi laamaheeda marka la aasaasayey, adduunka qayb weyn oo ka mid ahi waxa ay ku hoos jirtay gumaysiga reer Yurub, oo go’aanba ma ay gaadhi karin e, goorma ayaa afkoodii inta lagu hadlay la yagleelay ‘Xeerar Caalami,’ ‘Maxkamad Caalami ah,’ iyo, kaaga daranta, ‘Urur Caalami ah?’
Waxan aynu maqalnaa “Halis Caalami ah,” e waa yaab e goorma ayaa dunidu isku halis noqotay? Goorma ayaa ay isku goljilic noqotay? Haddii nabadgelyada Maraykan iyo Yurubta Galbeed halis gasho, cidda halis gelisay miyaanay caalamka kula noolayn? Maxaa loo yidhi, waa ‘Halis Caalami ah,” ee loogu koobi waayay in ay tahay “Halis Galbeed.” Ma cadawga Galbeedka ayaa loo tixgeliyaa “Halis Caalami ah,” mise cadawga waddamo badan oo Bariga ah? Haddii Maraykan iyo Yurubta Galbeed ka baqayso ururro/dalal ku yaal Bariga adduunka, dalal Bariga adduunka ku yaalla oo ay Maraykan iyo Yurubta Galbeed halis u yihiin ayaa jira e maxaa laga yeelayaa? Yaa garsoore ka ah? Jabbaan dhaawaca uu soo gaadhsiiyay Maraykanku, KKK khatarka ay ku hayso soo-gelootiga Maraykanka, halista kooxaha Gaangisku ku hayaan maatida Galbeedka iyo gumaadka ay geysteen kooxaha Zealots kama burbur yara kooxaha Alqaacida iyo Daacish e, maxaa midkoodna loo gumeeyay, midna guusha loo siiyay?! Iyaba waa cibaaro!
Waxa aynu wada maqalnaa in qaaradda Ameerika uu “helay” Christopher Columbus, oo uu dhul badan oo Afrika ah uu ‘helay’ Faaska Digaamo iyo rag la mid ahaa, oo Aasiya qaybo badan oo ka mid ah ay ‘heleen’ Socoto reer Galbeed ahi. ‘Run’ ahaan miyay “heleen” dhulkan? Ma dhul aan cidi ogayn ayaa ay soo ogaadeen, mise dhul aanu reer tolkood ogayn ayaa ay soo ogaadeen? Ma reer Yurub ayaa ay wax u soo daahfureen, mise adduunka? Dhulkan ay yimaaddeen ileen dad baa ku noolaa oo aanu ku cusbayn e, ma in uu iyaga ku cusbaa ayaa loo xambaarinayaa dunidii dhanayd?
Waxa aynu maqalnaa nidaamyo la huwinayo ammaan weyn, iyo kuwo kale oo loo yeelayo iin weyn. “Adduunku” in uu sidaa u arko, ayaa la ina baraa. Maxaa keenay in shaadhka “Adduun” loogu soo gabbado si loo dedafeeyo nidaamyo Hantiwadaagga iyo Shuuciyaddu ku jiraan, loona difaaco hannaanka Hantigoosiga iyo Laybaraaliyadda?
Waxa aynu maqalnaa “Adduunka Saddexaad/Labaad/Kowaad.” Iyaba waa wayddiin e, yaa kala sooray dunida oo inba summad siiyay? Maxaa minqiyaaso ah ee la raacay si Afrika, qaybo Aasiya ka mid ah iyo Laatiin Ameerika loo siiyo magaca “Dunida Saddexaad?” Yurubta Galbeed iyo Maraykan ma iyaga ayaa isa siiyay magaca “Dunida Kowaad?” Waa yaab e, tartanka la galay si kaalmahaa loo kala galo maxaa uu ahaa? Xor iyo xalaal ma ahaa? Yaa martigeliyay?
Waxa aynu maqalnaa “Dawlada Tunka Weyn,” iyo, malaha, “Dawladaha Tunka Yar.” Budrus Qaali, Xoghayihii ‘Qaramada Midoobay’ (1992-1996), marka uu lahaa “Dawladaha Waaweyn maslaxaddooda ayay Qaramada Midoobay u dhega-nugushahay,” maxaa uu ka wadey? Ma waxa run ah danniga tibaaxaya in Galbeedku yahay midka ku amar-ku-taagleeya siyaasadda Qaramada Midoobay? Dawladaha Yaryar yaa quseeyay, oo qaybtaa siiyay? Waa yaab e, Qaramada Midoobay miyaanu “adduunku” ku midoobin? Mise ‘la ogaayoo gorayo haad bay noqotay?’
Waxa aynu maqalnaa “Waagii Madoobaa,” oo lagu sunto xilligii Yurub aanay adduunka la socon ee ay ka danbaysay. Qoraalka, akhriska, sayniska iyo falsafadduba xilligii aanay Yurub soo gaadhin in taariikhda loogu dhigo in ay yihiin “Dark Ages” ama Waa Madaw, maxay ka dhigan tahay? Dunida Barigeeda ilaa Shiinaha aqoonta taallay, iftiinka ka bidhaamayay, iyo ilbaxnimada ay ku naaloonayeen, ma waxa loo sadqaynayaa keli ah in Yurub ay ka qatanayd ilbaxnimadaa? Dunida xilligaa qaybina Waa Madaw ayaa u baryi jiray, qolo kalana Waa San e maxaa loo kala faquuqay labada cahdi? Ma Yurub ayaa beegaal iyo cabbir noqotay?
Ilbaxnimadii adduunka goorma ayaa inta la faquuqay Galbeedka loo sedburiyay? Waa wayddiimo ay tahay in qofka Soomaaliga, Muslimka, Afrikaanka, reer Bariga iyo Madawga ahi si qumman u dhugto, oo ku hakado!
Previous Gargaarka Shisheeye: Gumayn mise Gurmad?!
Next Muusigga Murugada